လူကြီးများအတွက် LEGO ၁၀၂၈၄ FC Barcelona Camp Nou အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
01 / 09 / 2021 07 / 09 / 2021 ရော့ Paton 1248 Views စာ0မှတ်ချက် 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်, ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona, 40485 FC Barcelona အခမ်းအနား, ဘာစီလိုနာ, စခန်း Nou, ကာတာလ, Catalonia, Creator Expert, FC အသင်းဘာစီလိုနာ, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, Lego, Lego Creator Expert, LEGO ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, လူကြီးများအတွက် Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, LEGO အားကစားကွင်း, Lionel Messi, မန်ချက်စတာယူနိက်တက်, မက်ဆီ, မန်ယူအသင်း, reviews, စပိန်
၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် လူကြီးများအတွက် Lego ဘာစီလိုနာ၏အထင်ကရအားကစားကွင်း၏ဂုဏ်နှင့်စိတ်ကိုသစ္စာရှိစွာဖမ်းယူပါ။
၂၀၂၀ ရဲ့အထင်ကြီးစရာနောက်ကိုလိုက်ကြည့်ပါ 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ခရစ်ယာန်အသစ် လူကြီးများအတွက် Lego theme ၏ဒုတိယမြောက် mammoth microscale stadium build၊ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelonaမရ။ ယေဘူယျအားဖြင့်တူညီသောပုံစံဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောဤနောက်ဆုံးအားကစားကွင်းသည်ဘောလုံး၏အကြီးဆုံးနှင့်အအောင်မြင်ဆုံးကလပ်များထဲမှတမူထူးခြားသောအိမ်အတွက်ထိုက်တန်သောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။
အပြင်းစားအပြာရောင်နှင့်အနီရောင်ထိုင်ခုံများနှင့်အတူ Barcelona ၏ပတ် ၀ န်းကျင်လမ်းများ၏ပုံစံတူပုံစံကိုဖောက်။ Camp Nou တာဝါတိုင်ကိုအားကစားဘုရားကျောင်းအဖြစ်သာမက၊ cityဒါပေမယ့် Catalonia ဒေသတစ်ခုလုံး La Blaugrana (အပြာရောင်နှင့်အနီရောင်) ကိုကိုးကွယ်ရန်အပတ်တိုင်းပရိသတ် (၉၀၀၀၀) ကျော်သည်မြေပြင်သို့ဆယ်စုနှစ်ခြောက်ခုကျော်ကြာခဲ့သည်။
Image ကိုရင်းမြစ်: fcbarcelona အင်စတာဂရမ်
Camp Nou သည်ကလပ်ဘောလုံးလောကတွင်အလေးစားရဆုံးနှင့်အလှဆင်ထားသောအသင်းအချို့ကိုသက်သေခံခဲ့ပြီးအားကစားဂိမ်း၏အကျော်ကြားဆုံးကြယ်အချို့ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းတွင်ရေးထားသောဒတ်ခ်ျဘောလုံးအတွေးအခေါ်ကိုယူဆောင်လာသူ Johan Cruyff ကဲ့သို့နာမည်များသည် ဘာစီလိုနာ ယနေ့တိုင်လိုက်နာဆဲဖြစ်သည်။ Diego Maradona, Hristo Stoichkov, Michael Laudrup, Ronaldo, Rivaldo နှင့် Ronaldinho ကဲ့သို့မည်သည့်နိုင်ငံခြားသားမဆို La Masia မှဘွဲ့ရလူငယ်များသည် Pep Guardiola, Carles Puyol, Xavi Hernandez, Andres Iniesta နှင့် Lionel Messi တို့ပါ ၀ င်သည်။
Camp Nou သည် Ballon d’Or ဆုကို ၁၂ ကြိမ်စံချိန်တင်ကာဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာကစားခဲ့ပြီး၊ များစွာသောအသင်းများကိုအိမ်မက် ၀ င်ခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံး အစဉ် ဂိမ်းကစားပြီးပြီ။
Camp Nou ၏အရှေ့ဘက်ထိုင်ခုံများပေါ်တွင်ရေးထားသောစာများသည်ကလပ်၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော 'Més que un Club' (ကလပ်တစ်ခုထက်ပို)၊ ကလပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုတည်ဆောက်ပုံ (အသင်းဥက္ကဋ္ဌများကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးအဖွဲ့ဝင် ၁၄၄၀၀၀ စီ) မှစံနမူနာများကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ မဲပေးပါ) ကွင်းထဲမှာရလဒ်တွေကိုလိုက်ရှာဖို့ပြောပေမယ့်ကစားဟန်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုဘယ်တော့မှမသုံးပါဘူး။ ၎င်းသည်ကွင်းအတွင်းမှတန်းတူညီမျှမှုနှင့်အသိတရားကိုမြှင့်တင်ရန်အသင်း၏လမ်းညွှန်ချက်အသီးသီး၌ပါ ၀ င်သည်။
ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများပါဝင်သော Catalonia ၏ရိုးရာဓလေ့များနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် Barcelona သည် အခြားအသင်းများထက်နိုင်ငံရေးပိုလုပ်သောအသင်း နှင့်ယခင်က (မကြာသေးမီက) စပိန်မှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုရှာဖွေရန်အချက်အခြာနေရာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်း၏တရားဝင်ရပ်တည်ချက်သည်ကြားနေရေးဖြစ်လျှင်ပင်ကလပ်သည်၎င်း၏ဒေသခံအသိုက်အဝန်းနှင့်ဒေသအတွက်ပေးဆပ်သည့်လေးစားမှု၏ဥပမာများ၊ အရောင်များနှင့်ဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်ခြင်းမှသည် Catalan ရှိမီဒီယာ၌အရာအားလုံးကိုဆက်သွယ်ခြင်းမှသည်။ ကာတာလန်အလံ၏အဝေးပြေးဝတ်စုံဒီဇိုင်းတစ်ခုထက်ပိုသည်။
ကောင်းသောအချိန်နှင့်ဆိုးသောအချိန်တို့၌ Barca သည်မည်သူနှင့်မျှမတူသောကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိသောကလပ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်၎င်း၏လူများနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော Camp Camp သည် Nou အားတည်ဆောက်မှုအံ့ of ဖွယ်ဘောလုံးကွင်းတစ်ခုထက်သာလွန်သည်။ အိမ်ကဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူး။
စိတ်ထဲရှိလျှင်၊ သင်သည်အိုးထရက်ဖို့ဒ်သမိုင်းနှင့်အစဉ်အလာများပါ ၀ င်သောအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးအားကစားရုံတစ်ခုအားနောက်သို့လိုက်လိုလျှင် Lego ပုံစံ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ကဒီမှာဖတ်ပါ) Camp Nou ထက်လည်ပတ်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့နေရာမရှိဘူး။
theme: လူကြီးများအတွက် Lego အမည်သတ်မှတ်မည် - ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona ဖြန့်ချိ: စက်တင်ဘာလ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 299.99 / $ 349.99 / € 329.99 အပိုင်းပိုင်း: 5,509 အသေးစားပုံများ: 0
ကနေ Lego ရှုထောင့်အရ Camp Nou သည်ဗိသုကာလက်ရာကိုလေ့လာရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်စေသည် ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံစံ၊ ဒီဇိုင်း၊ အရောင်နဲ့။ ပထမတစ်ချက်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ့တင်သံတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်လိုပဲငါတို့ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့အစုထဲမှာချက်ချင်းသိသာထင်ရှားပါတယ်။ 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် တစ်လျှောက်လုံး။
အောက်ခြေ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အသံနေအသံထားများမှ p သို့articular p ကိုarts နှင့်နည်းပညာများသည်အားကစားကွင်း၏အထောက်အပံ့ဘောင်ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ထူးခြားသောပုံနှိပ်ထားသော p မှဖြစ်သည်artဘောလုံးကွင်းနှင့် p အတွက်သုံးသည်artထိုင်ခုံများတည်ဆောက်ထားသည့် icular လမ်း၊ ဤနေရာတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောအရာများစွာရှိသည် 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ယုတ္တိဗေဒ၏ဒီဇိုင်းသို့ကူးပြောင်းသွားသည် ၁၀၂၈၄ FC Barcelona Camp Nou.
ဒါကမပြောပါ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona ကာဗွန်ကော်ပီဖြစ်သည် 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မရ။ အားကစားကွင်းနှစ်ခုစလုံး (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆရသည့်) တည်ဆောက်ပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရာအားကစားကွင်းများ၏သက်ဆိုင်ရာကဏ္moreများကိုပိုမိုဖော်ပြမှုနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီပါ ၀ င်သောအခြေခံစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona နေရာတွေမှာမင်းကိုသတိပေးနိုင်တယ် 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သို့သော်၎င်းသည် ၅.၅၀၉ အပိုင်းအစရှိ၎င်း၏သားရဲဖြစ်သည် Lego သတ်မှတ် (နောက်မှပို။
တည်ဆောက်ပြီးတာနဲ့အဲဒါကဆက်ပြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်၊ အဲဒါကိုငါတို့အများကြီးပြောပေမယ့်၊ အသေးစိတ်ကိုဂရုမစိုက်ဘူး၊ Lego အုပ်စုသည်ဤလက်ရှိဒီဇိုင်းခေတ်တွင်အစုံရောက်စေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအတွက်ပရိသတ်ကပိုကျယ်ပြန့်တယ် လူကြီးများအတွက် Lego အကြောင်းအရာသည်ကျယ်ပြန့်သောအသိပညာနှင့်ဤပုံစံသို့သာလာနိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ Camp Nou အကြောင်းသင်သိလျှင်အရောင်နှင့်ထိုင်ခုံများနှင့်ကွင်းကြီးတစ်ခုလုံး၏ယေဘုယျပုံသဏ္andန်နှင့်ဘောလုံးကွင်းလေးလုံးပါ ၀ င်သည်၊ သင်ဘောလုံးအားကစားကိုနှစ်သက်သည်။ Legoထို့နောက် ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona ချက်ချင်းအထင်ကြီးသည်။
၎င်းသည်အရွယ်အစားနှင့်အကြီးမားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် display နှင့်တူသည် Lego မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအစုံ ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်သာမကဘဲ 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဒါပေမယ့်လည်းအခြားအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော behemoths များနှင့်လည်းအနည်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် ၁၀၂၇၆ Colosseum, အ အလွန်ကြီးမားသော Architecture အစုံ ၎င်းသည်နည်းလမ်းအနည်းငယ်ထက်ပိုတူသည်။ အဲဒီသုံးခုစလုံးကိုတစ်ခုချင်းစီဘေးမှာထားလိုက်ပြီးမင်းရယ်စရာကောင်းတဲ့စုဆောင်းမှုတစ်ခုကိုရရှိသွားပြီ။ မင်းမှာငါတို့အများစုထက်ပိုကြီးတဲ့စားပွဲရှိတယ်။
Camp Nou သည်သင်အားသင်ကြားပေးသော၊ သင်နှင့်အတူကျင်းပသောပိုမိုစွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုရပြီးသင်တစ် ဦး တည်းအပေါ်ယံအဆင့်၊ တိုတောင်းသောအထင်အမြင်များရှိနေလျှင်၊ ဆယ်စုနှစ်ခြောက်ခုကျော်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောရေယာဉ်တစ်ခုအဖြစ်၊ ဘာစီလိုနာဖြစ်သည်။ ဘောလုံးသမိုင်း၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောရှုထောင့်များနှင့်သိမ်မွေ့သောအရာများအားလုံးကိုဖမ်းယူသည် architecture ဤတစ်မျိုးတည်းသောအားကစားကွင်းကိုဖန်တီးရန်အတူတကွလာကြပြီးထိုအရာများအားလုံးကိုအံ့သြဖွယ်အတွင်း၌မြှုပ်နှံထားသည် ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona.
ဤမျှခံ့ညားပြီးအထင်ကရဖြစ်သောကမ္ဘာကျော်အားကစားကွင်းကို အခြေခံ၍ ပြသသည့်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်ခင်းကျင်းပြသပုံသည်၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုအတွက်နည်းလမ်းတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona အထင်ကြီးသည်။ အဲဒါတွေထဲကတစ်ခုပါ Lego မင်းကအဲဒါတွေကိုယူလိုက်တဲ့အခါမင်းမျက်လုံးတွေကအရောင်တောက်သွားစေတယ်၊ ​​အဲဒါကမင်းအနီးကပ်ကြည့်တဲ့အခါတိုင်းကွဲပြားခြားနားတဲ့အသေးစိတ်ကိုပေါ်လွင်စေတယ်၊ ​​အဲဒါကမင်းနေရာလွတ်ကိုရှာနိုင်ရင် display ပေါ်မှာအချိန်ကြာကြာခံစားဖို့ဘဲ။
နှိုင်းယှဉ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည် 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဒါပေမယ့်လည်း ၁၀၂၇၆ Colosseum ၎င်းသည်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအတွဲနှစ်ခုလုံးနှင့်မည်မျှတူသနည်း ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona display model အဖြစ်နှင့်၎င်းနှင့်ဆင်တူသည့်နေရာကိုအံ့သြသည် 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ရွေးချယ်ထားသောနည်းစနစ်များနှင့်ယေဘုယျချဉ်းကပ်မှုများတွင်၎င်းသည်တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံအတွက်အဆင့်များနှင့်လည်းအလွန်နီးစပ်သည် ၁၀၂၇၆ Colosseum. ထိုမျှလောက်ပျော်စရာမကောင်းခဲ့ပေ.
အမှန်တော့၊ ကောက်ယူမည့်သူမည်သူမဆိုကိုကြိုတင်သတိပေးရမည့်အချက်တစ်ချက်ရှိလျှင် ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona အကြောင်းမှာ၎င်းသည်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆွဲဆန့်ရန် (သို့) တစ်စုံတစ်ယောက်အား၎င်းအားမျှဝေရန်ဖြစ်သည်artသင်တည်ဆောက်သောအားကစားရုံသည်အခြားသုံးနေရာနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ၎င်းတို့အားလုံးကိုတူတူဖြတ်ထားသောအပိုင်းများများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကဏ္ All အားလုံးနှင့်ကစားစရာမရှိ Brick Fanatics မှိုင်း Lego လက်သမား။
ဒါဟာငါတို့အတူတကွပေါင်းသင်းခြင်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စိတ်ရှုပ်စရာထပ်ခါထပ်ခါတူညီတဲ့အဆင့်မှာမဟုတ်ဘူး ၁၀၂၇၆ Colosseum -အားလုံး၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့်၊ က) လက်တွေ့ကမ္ဘာအားကစားကွင်း၏သဘာဝပုံသဏ္asန်၊ ခ) Colosseum နှင့်မည်သို့ဆင်တူသည်၊ ဂ) Camp Nou အတွက် Colosseum အကြေးခွံများတည်ဆောက်ရာတွင်အသုံးပြုသောနည်းစနစ်သည်မည်မျှထိရောက်မှုရှိသနည်း။ တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်ယှဉ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမဖြိုခွဲဘဲထပ်တလဲလဲသိသာလာလိမ့်မည်။
ဟုပြောသည်ခံကြောင်း ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona ဘယ်မှာအကျိုးရှိလဲ ၁၀၂၇၆ Colosseum တည်ဆောက်မှုတစ်လျှောက်ဤမျှလောက်များစွာသောအရောင်များနှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အပြောင်းအလဲများစွာကိုမပေးနိုင်ပါ။ အထုပ်၏ nucleus ကိုဖန်တီးရန်ထပ်တလဲလဲအပိုင်းများရှိနေပါသည်၊ ဒါပေမယ့်ရလဒ်ကအတူတကွရှိနေတာဘဲ၊ သင်ရလဒ်ကအတူတကွရှိနေသော်လည်း၎င်းကိုပတ် ၀ န်းကျင်သင်တည်ဆောက်သည့်အရာသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ မင်းရှေ့မှာရှိနေတဲ့အရာကိုခွင့်လွှတ်ပါ။
မင်းအားကစားကွင်းကို qu မှာဆောက်မယ်artပုံစံများကိုဖြည့်ရန်အလယ်ကွင်းပတ်လည်၌ဤအရာများ၊ မင်းကိုဘယ်လောက်ကြာအောင် ၀ မ်းနည်းမှုတွေခံစားရစေ၊ အဲဒါကလုံး ၀ ပျောက်ကွယ်သွားမှာဘဲ၊ Lego သတ်မှတ် အပြင်ပိုင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းအကြားအရောင်ကွာခြားချက်သည်ပြီးပြည့်စုံပြီးအစစ်အမှန်ကဲ့သို့တက်ကြွ။ အစုံ၏အရွယ်အစားသည်သင်မျှော်လင့်ထားသလောက်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။
မော်ဒယ်၏ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အသေးစိတ်အနည်းငယ်ပါ ၀ င်သည်artly သည် Camp Nou ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးဤအားကစားကွင်းအားထူးခြားစေသော ဦး တည်ချက်နှင့်ထောင့်ကျသောပြောင်းလဲမှုများကိုပြောပါသေးသည်။
minifigures များမပါဝင်ပါ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona, နှင့်အညီ 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ၎င်းမတိုင်မီနှင့်ဤအစုများပတ်လည်၌ယေဘူယျအလေ့အကျင့်နှင့်အတူ သို့သော်တီထွင်ကြံဆတတ်သောဉာဏ်ကြီးရှင်များ Lego ၀ ယ်ယူခြင်းအဖွဲ့၏လက်ဆောင်များသည်ဤအထူးပရိုမိုးရှင်းအစုံနှင့်လုံးဝသံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲရောင်းထွက်ပြီးအချိန်တိုင်းဖတ်သင့်သောဤပရိုမိုးရှင်းအစုံဖြစ်သည်။ 40485 FC Barcelona အခမ်းအနား.
၎င်းတွင်ပုံစံတူဘာစီလိုနာပုံစံအင်္ကျီကို ၀ တ်ဆင်ထားသောဘာစီလိုနာပရိတ်သတ်အသေးအဖွဲ ၅ ခုပါ ၀ င်သည်။ မင်းငါတို့ရဲ့ review ကိုဖတ်နိုင်ပါတယ် ဒီမှာ မင်းဒီစာကိုဖတ်နေချိန်ကုန်သွားရင်အောက်ကမှတ်ချက်များမှာချီးကျူးပါ။ ပုံစံခွက်များသည်အားကစားကွင်းတည်ဆောက်မှုများနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်း၊ ဤ minifigures အမျိုးအစားများသည်စျေးကြီးသောလက်ဆောင်များအပါအ ၀ င်အလွန်စျေးကြီးသောလက်ဆောင်များကိုဖြစ်စေသည်။ Lego အဲဒါကိုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်တာကရှေ့ဆက်သွားရင်အဆိုးဆုံးအရာတော့မဟုတ်ဘူး။
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့တွင် minifigures များပါဝင်သည် Lego Star Wars အားလုံးအပြီးသတ် Ultimate Collector Series များ။ San Siro လုပ်ရင်ငါတို့မီလန်နဲ့အင်တာမီလန်ပရိတ်သတ်တစ်နေရာရနိုင်တယ်။
40485 FC Barcelona အခမ်းအနား စက်တင်ဘာ ၁ မှ ၁၂ အထိ (အကန့်အသတ်မရှိ) လက်ဆောင် ၀ ယ်ယူနိုင်သောလက်ဆောင်အကန့်အသတ်ရှိသည် LEGO.com နှင့် Lego စတိုးဆိုင်များမှ ၀ ယ်ယူမှုများရှိသည် ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona.
အဆိုပါ Lego Group မှ st ရှိပါတယ်artမကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အစုံအလင်ပေးသောယုတ်ညံ့သောအလေ့အကျင့်တစ်ခုကိုပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ သို့သော်စျေး ၀ င်ရန်နီးစပ်သည်အထိစျေးနှုန်းအချက်အလက်များမပါပါ။ ဤသုံးသပ်ချက်များကိုထုတ်ဖေါ်ရန်အချိန်မီအဆင်သင့်ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လာမည့်အရာဝတ္ထုတစ်ခု၌အရာအားလုံးကိုအတူတကွထားရန်လိုသည် Lego မည်မျှကုန်ကျမည်ကိုမသိဘဲသတ်မှတ်ပါ။
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဤသုံးသပ်ချက်များကိုရေးသားခြင်းအတွက်အပြည့်အဝအကြောင်းအရာသည်တစ်ခါတစ်ရံအပြုသဘောဖြစ်စေ၊ တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်စေအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်စေသည်။ ဒါဟာငါတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတုန်းဘဲ Lego အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝေးကွာသွားနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပြုလုပ်ရန်နှင့်စျေးနှုန်းကိုခန့်မှန်းရန်နှင့်စစ်မှန်သောငွေပမာဏကိုကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ဖော်ပြသသောအခါတန်ဖိုးရှိသောခံစားချက်ကိုရရှိစေသည်။
In ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelonaကိစ္စတွင်၎င်းသည် set ၏ရှုထောင့်ကို ထောက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို£ 350 အမှတ်အသားတွင်သတ်မှတ်ထားသောအခါ၊ ၎င်းကိုပေါင် ၂၉၉.၉၉ / ၃၄၉.၉၉ / € ၃၂၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချလိမ့်မည်။
၎င်းသည်နှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးလည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထက်ပိုသောအပိုင်းပေါင်း ၁၆၁၁ ခုရှိသည် 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အရွယ်အစား၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးတက်လာသည်၊ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona UK တွင် ၂၀% သာစျေးပိုရှိသည်။ ၎င်းသည်အိုးထရက်ဖို့ဒ်တွင်ရပ်တည်ရန်ရပ်တည်မှုမှကွဲပြားသည့်အဆင့်များမရှိနိုင်ပေ၊ ၎င်းသည်အရွယ်အစား၊ အရောင်အသွေးစုံလင်စွာနှင့် Camp Nou ၏စစ်မှန်သောကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်သည်။
တန်ဖိုးရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေတစ်ပုံးအတွက်ပေါင် ၃၀၀ ကျန်သေးသည် Lego အုတ်များ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်သည်မှာသေချာသောစျေးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်အခြားအမှန်တကယ်ထူးခြားသောအဆောက်အအုံအတွေ့အကြုံကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်၊ ထူးခြားသော (နှင့်ကြီးသော) display အပိုင်းအစ (သို့) ပို၍ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်သည် Lego ဘောလုံးအားကစားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona လုံလောက်သောအတွေ့အကြုံနှင့်အထောက်အထားများကိုပေးသည်city တန်ဖိုးမျှတကိုကိုယ်စားပြုရန်
မင်းပျော်ဖို့ဘာစီလိုနာပရိတ်သတ်ဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူး ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelonaမရ။ ဘောလုံးဝါသနာအိုးတစ်ယောက်တောင်မဟုတ်ဘူး။ ကလပ်အသင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်း၊ သူ့ရဲ့ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်သွယ်မှု (သို့) သူ့ရဲ့နားလည်မှုကိုအသေးစိတ်သိဖို့မလိုပါဘူး ထိန်းချုပ်မှုအလွန်နည်းသောငွေကြေး ဘာတွေအများကြီးယူနိုင်ခဲ့လဲ ၁၀၂၈၄ FC Barcelona Camp Nou တစ် ဦး အဖြစ်ဆုလာဘ် Lego အတှေ့အကွုံ။
အဲဒါကမင်းသတိမထားရင်မင်းရဲ့သည်းခံမှုကိုစမ်းသပ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာလမ်းတစ်လျှောက်မှာစိတ် ၀ င်စားစရာ၊ အသေးစိတ်နဲ့ပျော်စရာတွေကိုပေးနိုင်တယ်၊ အဲဒါကမင်းကိုအရမ်းကောင်းတဲ့အထင်ကြီးစရာပြကွက်တစ်ခုနဲ့မင်းကိုထားပေးတယ်။aမှသင်မျှော်လင့်သောတန်ဖိုး Lego ဈေးအတိုင်းသတ်မှတ်ပါ။
ထို့နောက်သူတို့၏ဘောလုံးသို့ ၀ င်လာသူတိုင်းသည်e၏အပေါ်ယံအဆင့်တန်ဖိုးထားမှုထက်ပိုသောသူဖြစ်သည်xtra ဒီဇိုင်းအသေးစိတ်ကိုဒီမှာ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona ၎င်းသည်အလွန်ထူးခြားသောအခြားတစ်ခုဖြစ်သည် Lego စုဆောင်းရန်နှင့်အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ရန်အစုံဖြစ်သည်။
လာမယ့်နှစ်မှာနောက်ထပ်အားကစားကွင်းတစ်ခုထပ်ဆောက်ပါ။ ကျေးဇူးပါ San Siro ဒါမှမဟုတ် ဒါတွေထဲကတစ်ခုခု.
ထိုအလုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ခံသည် Brick Fanatics ဟုတ်တယ်၊ ပြီးတော့ဘာစီလိုနာကိုကူညီဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ် သူတို့ရဲ့ငွေရေးကြေးရေး - သင်၏ ၀ ယ်ယူခြင်းဖြင့် Lego ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များမရ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
လူကြီးများ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona အတွက် LEGO တည်ဆောက်ရန်အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။
ခေတ်အဆက်ဆက်။ အဆောက်အ ဦး ပြီးစီးရန်နံပါတ်ပေါင်း ၃၂ အိတ်ပါ ၀ င်ရန်ပျမ်းမျှတည်ဆောက်သူသည် ၁၅ နာရီခန့်ကြာသည် ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelonaမရ။ ဒီ set ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုဖြိုဖို့ဒါမှမဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုအခြားတစ်ယောက်နဲ့ဝေမျှဖို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးတယ်။
လူကြီးများ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona အတွက် LEGO တွင်အပိုင်းဘယ်နှစ်ခုရှိသနည်း။
အပိုင်း ၅၉၃ ခုပါ ၀ င်သည် ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelonaတရားဝင် mini team bus တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်, 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ၂၀၂၀ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သောအပိုင်း ၃၈၉၈ ရှိသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona အတွက် LEGO ဘယ်လောက်ကြီးလဲ။
၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona ၄၉x၄၆ စင်တီမီတာရှိပြီး၎င်း၏ခြေရင်းတွင်အကျယ်ဆုံးနှင့်အရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအမှတ်အဖြစ် Lego အတိုင်းအတာ ၂၁ စင်တီမီတာ Camp Nou အစစ်အမှန်သည် ၄၈ မီတာမြင့်ပြီး ၅၅၀၀၀ စတုရန်းမီတာကျယ်ဝန်းသည်။
လူကြီးများ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona အတွက် LEGO ဘယ်လောက်လဲ။
၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona ယူကေမှာယူရို ၂၉၉.၉၉ နဲ့အမေရိကန်မှာ ၃၄၉.၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ဥရောပမှာ ၃၂၉.၉၉ ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မနှစ်ကပေါ့ 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ails 249.99 / $ 299.99 / € 269.99